Maxkamadda Gobolka Saaxil oo sii daysay koox lagu Eedaynayay Budhcad Badeednimo oo laga soo qabtay Xeebta Xiis iyo Meydh | FooreNews
Home wararka Maxkamadda Gobolka Saaxil oo sii daysay koox lagu Eedaynayay Budhcad Badeednimo oo laga soo qabtay Xeebta Xiis iyo Meydh
Maxkamadda Gobolka Saaxil oo sii daysay koox lagu Eedaynayay Budhcad Badeednimo oo laga soo qabtay Xeebta Xiis iyo Meydh
Berbera(Foorenews) Maxkamadda Gobolka Saaxil ayaa manta Xabsiga ka sii deysay Toban Maxbuus oo muddo shan bilood ka badaan u xidhnaa Budhcad badeednimo, kadib markii ay sheegtay danbiyadii lagu soo Eedeeyay in lagu waayay.
Tobanka Maxbuus ee ay Maxkamaddu sii daysay ayaa shan bilood ka hor ay Ciidanka ilaaladda Xeebaha Gobolka sanaag soo qabteen kadib markii dagaal ku dhex maray badda gudaheeda, iyadoo sida ay Ciidanku ku Eedaynayeen wakhtigaasi waday hawlgal ay ku doonayeen inay Maraakiibku af-duubaan.
Kooxdan Budhcad badeednimada lagu Eedaynayay ayay Maxkamddu sii daysay sida ay Waaheen u xaqiijiyeen masuuliyiin ka mid ah Bahda Cadaaladdu, kadib markii Maxkamadda la hor keeni waayay markhaatiyo rsami ah oo ku fura inay falkaas ku hawlanaayeen.
Hase yeeshee warar aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in sii daynta kooxdan ay ka danbeeyeen Eheladooda oo dedaal u galay sidii loo jabin lahaa kiiska loo haysto. Isla markaana waxa la sheegay inay la galaan galaysteen dad ka ag dhaw Ciidanka ilaalada Xeebaha, Xeer ilaalinta iyo Maxkamadda lafteedaba.
Dhawaan waxa Xabsiga Mandheera laga sii daayay Maxaabiis ku xukunayd xukuno dhaadheer, kuwaasoo la sheegay inay saraakiisha Xabsigu sii daayeen kadib markii ay is faahmeen.
Previous PostSaleebaan Xaglo Toosiye oo ku dooday inuu dhammaaday dagaalkii deegaamada Sool iyo Buuhoodle Next PostXisbiga UCID oo si adag u cambaareeyay Dastuurka cusub ee Soomaaliya Iyo Wasiirka Khaarajiga Somaliland